WISDOM HIL မူကြိုကျောင်းသူ မဖွယ်မရာပြုကျင့်ခံရမှု ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူနှင့်မေးမြန်းချက် (ရုပ်သံ)…
July 7, 2019 Thuta Star 0
နေပြည်တော်ရှိ Wisdom Hill ပုဂ္ဂိလက မူကြိုကျောင်းမှာ မေ ၁၇ ရက်နေ့ အသက် ၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တယောက် မဖွယ်မရာပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ ယာဉ်မောင်း အောင်ကျော်မျိုး (ခ) အောင်ကြီးကို ပုဒ်မ-၃၇၆ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားပြီး ကျောင်းအနေနဲ့လည်း အမှုမှန်ပေါ်ရေးကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးက […]
ကသာမြို့နယ်တွင် ကပ်ကြေးနဲ့ ထိုးခံရတာကြောင့် ဗိုက်ထဲက လေးလသားကလေးငယ် ဆုံးရှုံး….
ကသာမြို့နယ်တွင် ကပ်ကြေးနဲ့ ထိုးခံရတာကြောင့် ဗိုက်ထဲက လေးလသားကလေးငယ် ဆုံးရှုံး ကသာမြို့နယ် သာစည်ကျေးရွာ အုတ်ဖိုမှာ နေထိုင်တဲ့ ဦးကြည်နိုင်+ဒေါ်ခင်မိုးနွယ် တို့ရဲ့သမီး မမာလာအေး ဟာ ဇွန်လ(၂၈)ရက်နေ့ နေ့လည် (၁)နာရီ အချိန်ခန့်က ဝဲဘက်နံကြားကို (၄)ချက် ၊ လက်မောင်းကို (၂)ချက် ၊ နောက်ကျောကို […]
မိတ်ဆွေတို့- အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် အဖိုးအဖွားများ ထမင်းတစ်နပ်အတွက် SHARE ပေးကြပါဦးဗျာ…
မိတ်ဆွေတို့– အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် အဖိုးအဖွားများ ထမင်းတစ်နပ်အတွက် SHARE ပေးကြဗျာ.. အစွန့်ပစ်ခံဘိုးဘွား ၂ ထောင်ကျော်ဟာ သန်လျင်မြို့ကသဘာဝတရားရိပ်သာမှာ ရှိနေပါတယ်။အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်ချိန်မှာ ငွေကြေးချို့တဲ့သူတွေ၊ စိတ်ပိုင်း/ရုပ်ပိုင်း ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းသူတွေ…သေခြင်းတရားကို ကျောတစ်ခင်းစာနေရာလေးကနေ စောင့်မျှော်နေရသူတွေ…တချို့ကို မိသားစုက လာပို့ခဲ့ကြတယ်၊ တချို့ ကိုယ့်ဘာသာ ရောက်လာခဲ့ကြတယ်၊ တချို့ကကျတော့ လမ်းပေါ်က ဒါမှမဟုတ် ဆေးရုံတွေမှာ […]
အလွယ် ကြည့်ရူနေတဲ့ ညစ်ညမ်းတဲ့ ရုပ်ပုံ ဇာတ်လမ်းတွေကို အမြန်ပိတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ လွင်မိုး…
ညစ်ညမ်းတဲ့ ရုပ်ပုံ ဇာတ်လမ်းတွေကို အလွယ် ကြည့်ရူနေတာတွေကို အမြန်ပိတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ လွင်မိုး လွင်မိုးက ဝါရင့် သရုပ်ဆောင် တွေထဲ တယောက် အပါ အဝင် ဖြစ်ပြီးတော ပရိသတ် အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက် ရရှိ နေသူ တယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ […]
ကားတိုက်ခံရပြီး မန္တလေးသုဓမ္မာဇရပ်မှာ(၁၀)ရက်လောက် သောင်တင် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး…
One to One က​လေးလူနာကူညီ​ရေးအဖွဲ့ရဲ့ ချီးကျူးဖွယ်​ရာ ပရဟိတလုပ်​​ဆောင်​ချက်​များနှင့်အတူ ကားတိုက်ခံရပြီး မန္တလေးသုဓမ္မာဇရပ်မှာ (၁၀)ရက်လောက် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးကို ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ကြောင်းကို AlinnMyay မှ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ ကိုဝမ်း(မန္တ​လေး) ဦး​ဆောင်​တဲ့ မန္တ​လေးအ​ခြေစိုက်​​ One to One က​လေးလူနာကူညီ​ရေးအဖွဲ့ဟာ မြန်​မာပြည်မှာ ပရဟိတလုပ်​​ဆောင်​ချက်​​တွေအ​နေနဲ့ လူတစ်​ဦးချင်းအတွက်​ဖြစ်​​စေ၊ […]
ချစ်သူကောင်မလေး ဆီကနေ ကောင်လေးတွေ အကြားချင်ဆုံး စကား (၇) ခွန်း…
အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူထံကနေ ကြားချင်နေတဲ့ စကားမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုစကားတွေပြောဖို့ ရည်းစားစဖြစ်ခါစ အချိန်ကနေ အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားတဲ့အထိ လိုအပ်ပါတယ်။ ခုပြောပြမယ့် စကား (၇)ခွန်းဟာ သူတို့ကို ဆက်စီဖြစ်တယ်၊ သူတို့ကိုယုံကြည်တယ်၊ တန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတာတွေ ပါဝင်နေပြီးသားမို့ ဘယ်လိုမျိုးတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ၁။ ကြည့်ကောင်းလိုက်တာ အမျိုးသားတွေဟာလည်း အမျိုးသမီးတွေလိုပဲ […]
မူကြိုဆရာမ ၂ ယောက် ရဲ့ ထူးထူးခြားခြား ကွဲလွဲနေတဲ့ ဖြေကြားမှု….
ထူးထူးခြားခြား ကွဲလွဲနေတဲ့ မူကြိုဆရာမ ၂ ယောက် ရဲ့ ဖြေကြားမှု BBC ကနေ မူကြို ဆရာမ ၂ ယောက်ကို အင်တာဗျူးတယ်။ အမှူနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နာမည်သတင်းထွက်နေတဲ့ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ရဲ့ ကလေး ၂ ယောက်ဟာ ဒီကျောင်းခန်းကို လာလေ့ရှိသလား လို့ မေးတယ်။ […]
BBC ကနေ မူကြိုဆရာမ၂ယောက်ကို အင်တာဗျူးတယ်။အမှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နာမည်သတင်းထွက်နေတဲ့ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ရဲ့ကလေး၂ယောက်ဟာ ဒီကျောင်းခန်းကို လာလေ့ရှိသလားလို့မေးတယ်။နှင်းနုဆိုတဲ့ဆရာမက တခါမှ မလာဖူးဘူး။တခါမှမတွေ့ဘူးလို့ဖြေတယ်။တခြားဆရာမတစ်ယောက်ကတော့ ဆရာမကြီးရဲ့သားတွေဆိုတော့ ရံဖန်ရံခါလာတာမျိုး မြင်မိပါတယ်လို့ဖြေတယ်။ ဒီမှာတင် ဆရာမ၂ယောက်ရဲ့အဖြေက ကွဲလွဲနေပြီဖြစ်တယ်။ဒါဟာထူးခြားမှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါ့အပြင် ဒရိုင်ဘာအောင်ကြီးရဲ့အဖေကို ဧရာဝတီသတင်းဌာနကအင်တာဗျူးတော့ သူအလုပ်စဝင်တဲ့နေ့ ၁၆ရက်နေ့မနက်မှာပဲ ကျောင်းကိုရောက်တော့ ဆရာမဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်နဲ့သူ့သားအငယ်လေးကကျောင်းခန်းမှာဆင်းတယ်လို့ ပြောတာသိရတယ်။ဒီတော့ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဆရာမရဲ့သားအငယ်၈တန်းကလေးဟာ အဲ့ဒီနေ့က […]
ချစ်သူသက်တမ်း ၅ နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာ လမ်းခွဲလိုက်ကြတဲ့ Lee Ki Woo နဲ့ Lee Chung Ah…
ချစ်သူသက်တမ်း ၅ နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာ လမ်းခွဲလိုက်ကြတဲ့ Lee Ki Woo နဲ့ Lee Chung Ah မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ မစိမ်းတဲ့ ကိုရီးယား သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသား Lee Ki Woo နဲ့ မင်းသမီး Lee Chung Ah […]
ထူးခြားအံ့ဖွယ်.. မန်ကျည်းတုံးအတွင်းမှ …ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပုံ​တော်​.. ပေါ်နေပုံ…စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး…
သူ ငယ် ချင်းေ တွဖူး ရအောင်ထူးခြားအံ့ဖွယ် မန်ကျည်းတုံးအတွင်းမှ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပုံ တော် ပေါ်နေပုံ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အရာတော်မြို့နယ် ရွာသစ်ကျေးရွာမှာပါသိန်းရွှေကြည်#crd သူ ငယ် ချင်းတွေဖူး ရအောင်ထူးခြားအံ့ဖွယ် မန်ကျည်းတုံးအတွင်းမှ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပုံ တော် ပေါ်နေပုံ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အရာတော်မြို့နယ် ရွာသစ်ကျေးရွာမှာပါသိန်းရွှေကြည် သူ ငယ် […]